एक डोज मात्र लगाए पुग्ने १५ लाख डोज अमेरिकाको खोप नेपाल आइपुग्यो,अब कसले पाउँछन् यो खोप ? – Tufan Media News
एक डोज मात्र लगाए पुग्ने १५ लाख डोज अमेरिकाको खोप नेपाल आइपुग्यो,अब कसले पाउँछन् यो खोप ?
काठमाडौं- अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्सअन्तर्गत उपलब्ध गराएको खोप नेपाल आइपुगेको छ। अमेरिकाले उपलब्ध गराएको १५ लाख डोज खोप लिएर कतार एयरको जहाज सोमबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो।खोप लिनका लागि स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विमानस्थल पुगेका थिए। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले मन्त्री श्रेष्ठलाई खोप हस्तान्तरण गरेका छन्।
अमेरिकी खोप उत्पादक कम्पनी जोन्सन एण्ड जोन्सनको उक्त खोप एक मात्रा लगाए पुग्ने खोप हो। नेपालले अमेरिकाबाट थप खोप खरिदका लागि समेत पहल गरिरहेको छ तर खोपको माग अत्यधिक भएकाले कतिपय कम्पनीहरुले सन् २०२१ सम्मका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नसकिने बताइरहेका छन्।
नेपालले खोपको आयात गर्न र भण्डारण गर्न पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि अझ बढी समय लाग्नसक्ने जानकारहरुको भनाइ छ।
कसले पाउँछन्?एक डोज लगाए पुग्ने सो खोप झन्डै १५ लाख मानिसलाई पुग्ने छ। तर उक्त खोप क-कसलाई लगाउने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। सोको निर्णय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने भनिए पनि खोप कसले पाउने भनेर अझै टुंगो भइनसकेकोछैन। खोपका लागि धेरैको निवेदन आएको छ। तर पहिलो प्राथमिकताचाहिँ उमेर समूह नै छ।
आँखीभौँ छेड्दा एक्कासी फुल्यो
खुट्टामा चो’ट लागेकी बालिकालाई
सधै नेपालीको भलो र
कति वर्ष देखि ‘यौ’
अब पुरुषका लागि गर्भनिरोधक